February 19, 2020 Mahad Jama 1
HARGEYSA(P-TIMES)- Iyadoo weli ay taagan tahay xiisadii ka dhalatay safar madaxweyne Farmaajo uu ku tagi lahaa magaalada Hargeysa ayaa waxaa maanta ka dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa wafti uu hogaaminayo wasiirka Maaliyadda dowladda federaalka Ethiopia Axmed Shide iyo xubno ka tirsan xafiiska Ra’iisal wasaaraha Ethiopia.
Waftiga wasiirka oo ay kamid yihiin xubno oo ka tirsan xafiisa Ra’iisal wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed iyo masuuliyiin kale ayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kala hadlaya sidii uu ku ogolaan lahaa imaanshaha madaxweyne Farmaajo ee magaalada Hargeysa si looga wada hadlo arimo kala duwan.
Masuuliyiintani ka socda dalka Ethiopia ayaa gogol xaadh u ah qorshaha Ethiopia ee isku keenida madaxweynayaasha Somalia iyo Somaliland, waxaana Somaliland ay weli kusii adkaysanaysaa diidmadeeda ku aadan safarka Farmaajo.
Ra’iisal wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo qayb ka ah qorshahani ayaa bartilmaameedkiisu uu yahay isku keenida madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo oo raali galin ka bixiyey dhibkii ka dhacay magaalada Hargeysa xiligii dowladdii dhexe ee madaxweyne Siyaad Barre ayaa Somaliland ku qancinaya sidii ay dib ugu soo laaban lahayd masraxa Soomaaliyeed ee qaranimada dalka.
Dowladda Ethiopia oo haatan xidhiidh wanaagsan la leh dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qorshaynaysa in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Biixi ay iskugu keento miiska wada hadalka si loo dhameeyo tabasho walba oo u dhaxaysa labada dhinac, waxaana safarka Farmaajo soo dhoweeyey madax iyo hogaamiyaal dhaqameedyada Somaliland oo ku tilmaamay arintaasi mid ku haboon Somaliland xiligani si ay dowladda dhexe ugala garnaqsato arimo badan.
Damaca Ethiopia oo huwan arimo badan ayaa salka ku haya sidii door wacan ay ugu yeelan lahayd doorashada soo socota iyo dhamaynta khilaafka haatan taagan, taas oo dhabaha u xaadhi karta in Ethiopia ay saamayn xoogan ku yeelato siyaasada dalka.
Somaliland laftirkiida ayaa Ethiopia u aragta saaxiibka ugu dhow ee ay ku leedahay Qaarada Afrika, waxaana Abiy uu hore iskugu geeyey Addis Ababa Muuse Biixi iyo Farmaajo si ay uga hadlaan waxyaabaha ay isku hayaan labada dhinac balse madaxda Somaliland ayaa Farmaajo u arka shakhsi awood ku dhex yeelan kara Somaliland hadii uu ka dago Hargeysa taas oo ka dhigan in midnimo cusub ay ka dhalan karto Somaliand oo hada taagan mowqif ka duwan maamulada kale ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya.
Hadii Muuse Biixi uu diido qorshaha taagan socda waxaa dhici kara fashil ku aadan damaca Ethiopia iyo dadaalka uu wado Abiy Ahmed.
Diidmada Biixi ee qorshaha Abiy waa fursad aad u wanaagsan ay ka faa`iideysankaraan siyaasiyiinta Sool iyo Sanaag.
Haddii Somaliland ay u gacanseyrto qorshaha
Itoobiya waxaan shaki ku jirin in halkaas ay fursad wanaagsan uga soo baxayso Sool iyo Sanaag laakiinse meey dadkii arrinkaas fahansan.